Minanku Minankii Maaha Qalinkii: Cabdicasiis Adan Ducale (Jalawo)
Minanku Minankii Maaha Qalinkii: Cabdicasiis Adan Ducale (Jalawo) 0 Monday 26th December, 2016 in Aragtida Dadweynaha by Xafiiska Hargaysa Visits: 533
Minanku Minankii Maaha Qalinkii: Cabdicasiis Adan Ducale (Jalawo) Xisbiga wadani waxa uu raacay wadadii ismaciil bubaa hore umariyey c/raxman tuur
Dhawaan ayay ahayd markii ismaci bubaa oo jooga xamar uu shaciyey inu qaatay mabda'a Somaliland.
Arintaasi markii ay soo baxday ayaa suxufiga yusuf garad ka qoray warbixin wakhtigii ay is Barteen bubaa ,oo uu sheegay inay ahyd wakhtigii shirki dib uheshiisinta somaliya eelagu Qabtay ethiopia.
Wakhtigaa oo ismacii ahaa wasiirka maliyada somailnd .
Waxaynaku kulmeen jabuuti ,waxa uuna yusuf garad ku yidhi waxaad maqi dontaa dhawaan War aad ku farxi doonto waana inaanay jirin wax somaliland isaga iyo tuurna tegi donaan Xamar .
Hadaba dadweyne waxa lasocotaan inuu ismaciil galay khayinimo wadan
Inago soo xiganayna shekada waxa ino soobaxaysa in uu c/raxman tuur jarkatuuray arrintanaa U la ogaa ,hadaba waxaan qalinka u qaatay arinta kulankii nayroobi ee ciro iyo cumar c/rashiid
Waxaa arinta ka danbeeyey ismacii bubaa ,dhawana waxa uu dubai isugu geeyey ciro iyo Jawaari, waxan odhankaraa bubaa waxa uusooqatay qandaraas somaiweyn waxaana u Fududeeye xusbiga wadani oo noqday wadadii loo marilaha midnimada somaliweyn.
Waxa iyana inagu cusub oo durba ka muuqata dalka siyasadii iyo dhaqamadii siyasiynta Xamar
Waa arrinta wadani leyihiin waxa lalaayey masuiyiin wadaniya ion suuqa lagu layo iyadoo Ujeedadu tahay borobagaande lagu waxyelaynayo dimuqradiyadii iyo tartanki xalasha aha ee Xisbiyada somailand ku tartamayeen wakhtiga badan iyago leh kumiya dadkii suqa kuaynaya .
Hadaba waxan leeyahay wadani arintan idinka ayay idinla socotay oo kulmiye wuxuu Soomaray 8 sano oo mucaradnima iyo wakhtiyo badan oo dagaal lagu qaday oo rassalagu riday
Marra may dhicin in kulmiye kaga jawabin gacan kahadal ,maanta sabab ku keifta ma jirto Dhaqana uma lahayn dadka reer somaliland ,balsewaa dhaqan cusub iyo wadani cusub oo ay Ka dhexmuuqato siyaasadii xamar taalay indadka kala siyasada isu adeegsadaan dilal waa Siyasadii iyo dhaqankii xamar yaalley waxan odhankara waxaa uulasocday falkani prof.bubaa.
Ismaciil bubaa waxan leeyahay minan kani minankii maaha, halkani xamar maaha waa Somaliland .
Cabdicasiis adan ducale(jalawo)
Ramadan 2017: Important Health Tips For Ramadan May 27, 2017
Horumarkeenu kuma jiro inaan takoorno dadkeena ugu tabaca badan ee wax soo saarka leh. Weedh iyo fical kal fog May 26, 2017